IAfrika imemezele ukuthi alisekho igciwane le-polio | Scrolla Izindaba
Leli gciwane laliphethe izingane ezingaphezu kwezi-350,000 ngonyaka wezi-1988 kanti futhi lakhubaza izingane ezi-77,000 ngonyaka wezi-1996.
Kepha iminyaka engama-30 yokusebenza ngokungakhathali okwenziwa yizinhlangano zezempilo ezahlukahlukene, kuholele kwisibalo esingama-33 nje kuphela selokhu kwabikwa ngonyaka wezi-2018.
Futhi kuleli sonto, i-African Regional Certification Commission imemezele ukuthi izwekazi lase-Poland alisenalo igciwane le-polio.
I-Nigeria ibe izwe lokugcina eAfrika ukumenyezelwa ukuthi alisekho nakhona igciwane le-polio.
Esikwaziyo ngegciwane le-polio yasendle ukuthi:
• Lihlasela ikakhulukazi izingane ezingaphansi kweminyaka emihlanu – lihlasela uhlelo lwezinzwa
• Lithelelana ngokuthi lisuke kuwe liye komunye – ikakhulukazi ngamanzi angcolile
• Kungaholela ekukhubazekeni okungaguquki
• Nokwendela kweliphakade kungenzeka